Tacadiga Liyuu Booliis: Dhacdo xanuun badan: W/T Ismaaciil Ubaxle | Laashin iyo Hal-abuur
Tacadiga Liyuu Booliis: Dhacdo xanuun badan: W/T Ismaaciil Ubaxle
Hooyo Haysata Caruur Mataano Bil uun jirey ayaanu Dilnay Iyada Iyo Ninkeedii, Mataanihiina Goobtii ayaanu kaga Dhaqaaqnay. Way Ooyayeen markii aannu sii soconnay.Sidaas Waxaa Yiri Askari ka Tirsanaa Ciidamada Arxan Laawayaasha Liyuu Boolis. ( Fadlan Walaal Akhri Dhacdo Xanuun Badan oo Arimahaas ka Hadleysa.)
Laba Weriye oo u dhashay dalka Iswiidhan oo mar sii horeysay dalka Itoobiya lagu xiray ayaa Buug ay qoreen waxa ay ku xuseen dhacdo naxdin badan oo ciidanka arxanka daran ee Liyuu Boolisku Sameeyaan.
Sheekadu waxa ay ku saabsan tahay nin magaciisa Cabdi ku soo koobay oo ka tirsanaan jiray Ciidanka Liyuu Booliska oo ka sheekaynaya wixii ay samayn jireen waxa aanay sheekadu ku bilaabmaysaa sidan,”
Dadku way istaagayaan marka aannu dhaafayno, dumar xiran xijaab madow iyo maryo midabbo badan ayaa na eegaya. Cabdulaahi ayaa dhawaaqay kaddibna waxa uu na geliyey deyr ood ka samaysan. Gudaha waxa ku yaalla aqal soomaali yar, hortiisana ardaa aanay cidi joogin, Ri’ mooyaane.
Cabdi oo ahaan jirey askari ayaa iga qaaday khariiraddii Itoobiya. Labada gacmood ayuu ku qabtay isaga oo akhriyaya magacyada tuulooyinka. Si taxaddir leh ayuu isugu laabay, kaddibna waxa uu dul dhigay ciidda dusheeda, isaga oo gacanta xaggeeda dambe kaga masaxaya dhabankiisa illinta.
“Ma aan diidi karayn” ayuu yiri Cabdi. “Amma ONLF ayaad tahay, amma ciidanka cusub ayaad tahay oo waxa aad la dagaallami doontaa ONLF. Labadaa wixii aan ahayn, waa in aad dalka ka tagto.”
Ciidankan waxa la sameeyey kaddib weerarkii ay Jabhadda ONLF ku qaadday fariisimihii Petrona, sannadkii 2007. Af-amxaariga, liyuu waxa ay ka dhigan tahay “cusub”, ciidankaas oo sannaddo kooban gudahood ku noqday cudud milatari oo uu garwadeen ka yahay madaxa nabadgelyada, Cabdi Maxamed Cumar ” Cabdi Iley”, imikana ah madaxweynaha deegaankaas. Taasi waxa ay u sahashay dowladda Itoobiya in ay ku tilmaamto khilaafkan, mid sokeeye. Imika waxa ay u eg tahay walaalo is dilaya, markii horena waxa ay ahayd gumeysi ay dowladda dhexe waddo.
Cabdi waxa uu calaamad ku sameeyey halka ay khariiradda kaga taallo togga Faafan, ku dhowaad 120 km dhanka waqooyi kaga aaddan qalcadda shirkadda Africa Oil. Goobtaas ayuu joogey maalin ka mid ah bishii Julay sannadkii 2010-kii isaga oo xiran dharka cawlan ee milatariga, waxa aanu dhegeysanayey amarka madaxweynaha. Cutub milatariga ah ayaa weerar lagu soo qaaday, tuulada dagaalku ka dhacay agteeda ayuu madaxweynuhu kula hadlay ciidanka oo yiri: “Ma jiraan waxa shicib la yiraa meeshan.”
Qoraalkan waxa Af-soomaali ku turjumay
Qoraa: Ismaaciil Ubaxle oo degan Iswiidhan.
Xigasho: Barta facebook Cabdi Nuur Kolombo